Twin Seoul sigaba Inqanaba lesibini kunye "test" kuba
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul sigaba Inqanaba lesibini kunye "test" kuba
Ukusuka edibene indlela
newele Seoul ukufumana [3500 yen yovavanyo lwentsebenzo Free] a izangoma yokwenene, xa uzama ukubuyela omnye komphefumlo kwakhona, oko kuthiwa qiniseka ukuba kudlula izigaba ezisixhenxe. Inxaxheba kwinqanaba lokuqala ukuqaphela omnye komnye, kwaye imibuzo ngamandla nokuvuka ngokomoya, kodwa elidlulileyo ixesha liya Stage ngokuba "test" sesibini isigaba.
Oku kuthiwa abe yokuqala ukuvela intlungu sidlulele amanqanaba ezisixhenxe. Xa udlulile ngengqiqo yokomoya, isigaba ngobuso eyona ngxaki wesibini isigaba. I "test", ngelixa Ndiyazi ukuba ninomdla omnye komnye kakhulu omnye komnye, kukuba xa kuthathelwa ingqalelo le ngxaki uyinike kwenzeka ukuba uqhubeke njani ukuya kwinqanaba elilandelayo.
kangaka kuba ngabantu ababini ababeze ubomi eyahlukileyo ngokupheleleyo, aniyi kukwazi ukuba omnye lula kangangokuba nkqu umphefumlo umfuziselo. Ukuza kuthi ga kule ego eye ezityaliweyo nganye yobomi, ukuba nizityhafise oodwi ukuba ashiye ngengqiqo wafumana inxaxheba kwinqanaba lokuqala.
ngexesha yokuqala ntlungu
? amava kunye Inqanaba lesibini ulwazi Kaowodasu
newele Seoul Twin Seoul nganye amava uthando siwiswa, ngenyhek yokomoya obufunyenweyo kwinqanaba lokuqala nganto ziba. Oku, ngaphezu ukuba umphefumlo kubiza omnye komnye, amava kunye nolwazi wafumana apho uye wenza ngokuvumelana ngoku ukuhlala ugxininiso iimvakalelo.
? kwaye iye yasilela eluthandweni ukuba ndiye ndafumana
wakha ukuthanda ifunyenwe imprinting of ngendlela oku, kuba sisicaka langoku ezifana Ulolawula ebekelwa ngokwabo yi amava xiang. Ngoko ukuthetha, loo nto ihleli engqondweni ngendlela yokuba imprinting. Ukuziva ezithatha ngamnye ezinye ngamandla nye
kwinqanaba lokuqala, iya kuphelelwa nge recall le imprinting. Emva koko, ungenza agxeke ukuba elinye iqela ngokusekelwe kwi imprinting, nayo Movement, ezifana okanye ixhala basiva kwixa elidlulileyo uthando Ndaphela ubambe nemvo umona urhano lokuba baya kuphuma.
? ego ekumelaneni nxamnye nayo iye ezityaliweyo nzima
amava elidlulileyo ego ayenzelwanga ukuba kususwa lula njalo. enkulu kakhulu ukuba yeleyo ego, uya kuba nako ukunciphisa umgama phakathi umphefumlo amawele. Ngesi sigaba, oko kuthetha ukuba intlungu ixesha lokuqala inkalo ephambili sesibini isigaba.
umphefumlo iwele-nye, ukuze nokuba ungahlula intlungu na owoyiswa eli nqanaba yesibini yalahlwa kwixesha elizayo yeqhosha
ego wakhe, waba kunye kudla ngokuba nzima. Ngenxa yesi sizathu, umphefumlo ezimbini ixhala esomeleleyo ukubandezeleka kwinqanaba elilandelayo, yaye usoloko uya kufumana ngokwahlukana.
kunqabile, ixhala nokubandezeleka ukucima intlungu kwi yesibini eqongeni, kodwa asenokuqhubeka nenqanaba kuyo ngaphandle ukunyathela ukwahlulwa kweqonga, bekuya kuba bhetele ukuba silindele kakhulu. Nokuba ngaba okanye ukoyiswa le nquleqhu, iya kudluliselwa kwisigaba esilandelayo.
Mhlawumbi uqhubeke nenqanaba kuyo ngaphandle ukunyathela phezu di, kodwa mhlawumbi kufuneka silindele lukhulu. Nokuba ngaba okanye ukoyiswa le nquleqhu, iya kudluliselwa kwisigaba esilandelayo.